မှတ်ချက်များ - ဤစာတမ်းကိုဂျာနယ်ရှိ“ ဆွေးနွေးငြင်းခုံ” အမျိုးအစားအောက်တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည် 'စွဲလမ်း' ၎င်း၏အဓိကအားနည်းချက်မှာလိင်မှုဆိုင်ရာအရာအားလုံးကိုဖုံးကွယ်ထားသည့်မလိုက်နာသောလိင်အပြုအမူ (CSB) ကိုကိုင်တွယ်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်“ CSB” သည် hypersexuality သို့မဟုတ်“ sex စွဲလမ်းမှု” ကိုလွှမ်းခြုံနိုင်ပြီး serial infidelity သို့မဟုတ်ပြည့်တန်ဆာများနှင့်ဆက်ဆံခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများပါဝင်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်းများပြားလှသောမုန်းတီးမှုရှိသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအရေးမပါကြပါ။ “ လိင်စွဲလမ်းမှု” နှင့်၎င်းမှသုတေသနကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုနှင့်သီးခြားစီစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အဆုံးစွန်သော၏မျိုးကွဲဖြစ်ပါတယ် အင်တာနက်ကို စွဲ။ ကြည့်ပါ -
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို (2015) ။
ဤစာတမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးမှာ“ ပြStatနာ၏ဖော်ပြချက်” နှင့်“ Defining CSB” ကဏ္ “များ သည်“ hypersexuality” နှင့်သက်ဆိုင်ပြီး CSB ၏ neurobiological အခြေခံကိုထောက်ပံ့သည့်လေ့လာမှုများသည်အင်တာနက် porn အသုံးပြုသူများအားလုံးနီးပါးဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောမရေရာမှုများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ အကြောင်းမှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအပေါ်သုတေသနပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မလိုအပ်ဘဲသတိထားသောဘာသာစကားလိုအပ်ခြင်းကြောင့်ခိုင်မာသော (နှင့်ကြီးထွားလာသော) သက်သေအထောက်အထားများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုနှေးကွေးစေသည်။ အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုကိုသံသယမရှိစစ်မှန်သောများမှာ နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲနေတဲ့မျိုးကွဲဖြစ်ပါတယ်။
Shane ဒဗလျူ Kraus1, 2, *, Valerie Voon3 နှင့်မာ့ခ် N. Potenza2,4
အပိုဒ်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းထုတ်ဝေ: 18 Feb 2016
သုတေသနဂိတ်အပေါ်အပြည့်အဝ-စာသားကို PDF ကိုမှ Link ကို
ရည်ရွယ်ပါသည်: non-ပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ် 'အမူအကျင့်' 'စွဲလမ်းအဖြစ်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ခွဲခြားများအတွက်သက်သေအထောက်အထားအခြေပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့။
နည်းလမ်းများ: မျိုးစုံ domains များ (ဥပမာ, epidemiological ဖြစ်စဉ်, လက်တွေ့, ဇီဝဗေဒ) မှဒေတာများပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်လောင်းကစားစွဲလမ်းရာမှ data တွေကိုရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်စဉ်းစားနေကြသည်။
ရလဒ်များ: ထပ် features တွေ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားတည်ရှိနေ။ ဘုံ neurotransmitter စနစ်များ CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ, မကြာသေးမီ neuroimaging လေ့လာမှုများတဏှာနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်းတူညီမီးမောင်းထိုးပြ။ သိကျွမ်းခြင်း၌စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကွာဟချက်လက်ရှိတည်ရှိနေပေမယ့်အလားတူ pharmacological နှင့် psychotherapeutic ကုသမှု, CSB နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစှဲဖို့သက်ဆိုင်သောဖြစ်နိုင်သည်။
ကောက်ချက်: ပစ္စည်းဥစ္စာစှဲဖို့အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ချိတ်ဆက်သုတေသနကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်နေသော်လည်းနားလည်မှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောကွာဟချက်တစ်ခုစွဲအဖြစ် CSB ၏ခွဲခြားရှုပ်ထွေးနေဆဲဖြစ်သည်။
အဓိကစကားလုံးတွေ: စွဲ, အမူအကျင့်စွဲလမ်း, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, hypersexuality, neurobiology, စိတ်ရောဂါရောဂါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive
အဆိုပါ Diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ (DSM-5)  ပြောင်းလဲစွဲအမျိုးအစားခွဲခြားမှုများလွှတ်ပေးရေး။ '' ပစ္စည်း-Related နှင့်စွဲခြင်းရောဂါ ': ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, DSM-5 အတူတကွခေါင်းစဉ်သစ်တစ်ခုကဏ္ဍပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း (လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ) နှငျ့ပတျသကျသောမရောဂါအုပ်စုဖွဲ့။ သုတေသီများတစ်ခုစွဲအဖြစ်က၎င်း၏ခွဲခြား [2-4] ကိုယခင်ကထောက်ခံခဲ့ကြပေမဲ့လည်းပြန်လည်ခွဲခြားဆွေးနွေးငြင်းခုံဖြစ်စေခဲ့သည်ထားပါတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူခွဲခြားရောဂါများ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11 ၏ 11th edition အတွက်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်ရှိမရှိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး )  ။ non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related စွဲအဖြစ်ရောဂါလောင်းကစားစဉ်းစားအပြင်, DSM-5 ကော်မတီဝင်ထိုကဲ့သို့သောအင်တာနက်ကိုဂိမ်းရောဂါကဲ့သို့သောအခြားအခြေအနေများ '' အမူအကျင့် '' စှဲ  အဖြစ်သွင်ပြင်လက္ခဏာရပါမည်ရှိမရှိဆင်ခြင်၏။ အင်တာနက်ကဂိမ်းရောဂါ DSM-5 တွင်ထည့်သွင်းမခံခဲ့ရပေမယ့်, ကနောက်ထပ်လေ့လာမှုအဘို့ပုဒ်မ3မှထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သည်အခြားမမှန်စဉ်းစားပေမယ့် DSM-5 အတွက်မပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ အထူးသ hypersexual ရောဂါ  ကိုအဆိုပြုထားစံပြဿနာ / အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏အဖြေရှာတဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေထုတ်လုပ်, ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ အကွိမျမြားစှာအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်အရေးကြီးသော domains များအတွက်မလုံလောက်သောဒေတာဖွယ်ရှိ  ပံ့ပိုးနှင့်အတူဤဆုံးဖြတ်ချက်များမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။
လောင်းကစားဝိုင်းမှ၎င်း၏ဖြစ်နိုင်သောဆက်ဆံရေးလိမ့်မည်အဖြစ်မသင့်လျော်သို့မဟုတ်အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်အခက်အခဲများအဖြစ်သတ်မှတ်လက်ရှိစက္ကူ, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB), အတွက်, တဦးတည်းရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဒုက္ခဆင်းရဲသို့မဟုတ်ချို့ယွင်း generate ကြောင်းတိုကျတှနျးထားသ / မတရားသောသို့မဟုတ်အပြုအမူ, စဉ်းစားပါလိမ့်မည် နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်း။ CSB များတွင်ပြင်းထန်သောနှင့်ထပ်တလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်, တိုကျတှနျးထားသ / မတရားသောသို့မဟုတ်အပြုအမူအချိန်ကျော်တိုးမြှင့်နိုင်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူ့ချို့ယွင်း [7,9], ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ ကြိုတင်လေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ, ပြဿနာ hypersexuality / hypersexual ရောဂါနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အကြားတူညီရေးဆွဲခဲ့ကြပေမယ့်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အထက်ပါစည်းကမ်းချက်များကို subsumes ကြောင့်ပြဿနာ / အလွန်အကျွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အမျိုးအစားရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အသုံးအနှုန်း CSB ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိစက္ကူမျိုးစုံ domains များ (ဥပမာ, epidemiological ဖြစ်စဉ်, လက်တွေ့, ဇီဝဗေဒ) မှဒေတာများပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဖြေမြို့၌ကျန်ကြွင်းသောရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ခွဲခြားကိစ္စများအချို့ကိုဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် CSB ၏ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ ဗဟို, (အလွန်အကျွံပေါ့ပေါ့လိင်, ညစ်ညမ်းနှင့် / သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏မြင်ကွင်းအပါအဝင်) CSB ဒီတော့လျှင်, တကအမူအကျင့်စွဲအဖြစ်ခွဲခြားထားရမည်, တစ်ဦး diagnosable ရောဂါထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်သင့်သနည်း CSB ၏လေ့လာမှုပေါ်ရှိလက်ရှိသုတေသနကွာဟချက်ပေးထားကျနော်တို့ CSB များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုမြင်လျှင်လူများအတွက်ပိုကောင်းအဖြေရှာတဲ့အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသအားထုတ်မှုအကြောင်းကြားနိုင်သည့်သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်အနာဂတ်သုတေသနနှင့်နည်းလမ်းတွေအကြံပြုချက်များနှင့်အတူကောက်ချက်ချ။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်း CSB ၏လေ့လာမှုကိုကိုးကားစာပမြေား (ပုံ။ 1) တိုးမြှင့်ပါပြီ။ သုတေသနကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်နေသော်လည်းနည်းနည်းများသဘောတူညီမှု CSB  ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်တင်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သုတေသီများနှင့် Clinician ကြားတွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ hypersexual ရောဂါ၏အင်္ဂါရပ်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်တချို့ကရှုမြင်ပြဿနာ / အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှု  non-paraphilic CSB , ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွရောဂါ  ဒါမှမဟုတ် '' အမူအကျင့် '' စွဲ [13,14] သကဲ့သို့တစ်ဦးခံစားချက်ရောဂါ။ CSB လည်း ICD-11 အတွက် impulsecontrol မမှန်များ၏အမျိုးအစားအတွင်းအဖြေရှာတဲ့ entity အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိသည်  အလုပ်လုပ်ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း, သုတေသီများနှင့် Clinician ပြဿနာ hypersexuality ၏မူဘောင်အတွင်း CSB conceptualizing စတင်ပါပြီ။ 2010 ခုနှစ်တွင်မာတင် Kafka  DSM-7 ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့ '' hypersexual ရောဂါ '' ဟုခေါ်တွင်သစ်တစ်ခုစိတ်ရောဂါရောဂါအဆိုပြုထား။ hypersexual ရောဂါ  များအတွက်သတ်မှတ်ချက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုကိုထောက်ပံ့နေတဲ့လယ်ကွင်းရုံးတင်စစ်ဆေးနေသော်လည်းအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး DSM-5 ထံမှ hypersexual ရောဂါဖယ်ထုတ်လိုက်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ  ခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်, မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ, pathophysiology, ရောဂါနှင့် neuropsychological စမ်းသပ်ခြင်းအပါအဝင်သုတေသနလုပ်ငန်းများမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ထမြောက်ကြသည်။ အခြားသူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများနှင့်အပြုအမူများပုံမှန်အကွာအဝေးနှင့်ရောဂါဗေဒအဆင့်ဆင့်အကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘာသာဂုဏ်ထူး [16-18] ၏မရှိခြင်းပေးထား, hypersexual ရောဂါမှုခင်းအလွဲသုံးစားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအပြုသဘော diagnoses ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်းစိုးရိမ်မှုများထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ဘို့သူတို့နှင့်အတူ hypersexual ရောဂါရှယ်ယာတူညီဘို့အကွိမျမြားစှာစံ (စားပွဲတင် 1)  ။ နှစ်ဦးစလုံးချို့ယွင်းထိန်းချုပ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့မအောင်မြင်ကြိုးစားမှု) နှင့်အန္တရာယ်များကိုအသုံးပြုခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာအသုံးပြုမှု / အပြုအမူအန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများမှဦးဆောင်) နှင့်စပ်လျဉ်းစံပါဝင်သည်။ လိုအပ်ချက် hypersexual နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားလူမှုရေးချို့ယွင်းမှုအတွက်ကွာခြား။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါသတ်မှတ်ချက်လည်းဇီဝကမ္မမှီခို (ဆိုလိုသည်မှာသည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာ) အကဲဖြတ်နှစ်ခုပစ္စည်းများပါဝင်သည်နှင့် hypersexual ရောဂါများအတွက်သတ်မှတ်ချက်မကျင့်။ (ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်ဖို့လေးစားမှုနှင့်အတူ) hypersexual ရောဂါမှတမူထူးခြားတဲ့ dysphoric စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များနှင့်စပ်လျဉ်းနှစ်ခုသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားစံ hypersexual ရောဂါရဲ့ဇစ်မြစ် maladaptive ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာများထင်ဟပ်ထက်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေချွတ် warding တစ်နည်းလမ်းများ (တ္ထုများထံမှဆုတ်ခွာနှင့်ဆက်စပ်ဥပမာစိုးရိမ်စိတ်) စေခြင်းငှါ, အကြံပြုအပ်ပါသည်။ က dysphoric စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များမကြာသေးမီကပြန်ဖြတ်သို့မဟုတ်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို  တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနုတ်ထွက်ကြသူ CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါအကြံပြုထားပြီးဖြစ်သော်လည်းရှိမရှိတိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံများဆုတ်ခွာသို့မဟုတ်သည်းခံစိတ်, အခြေအတင်ဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်။ hypersexual ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားတစ်ဦးကနောက်ဆုံးခြားနားချက်အဖြေရှာတဲ့တံခါးခုံပါဝငျသညျ။ hypersexual ရောဂါတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခံရဖို့ကို 'တစ်ဦးက' 'စံငါးခု၏လေးလိုအပ်ပါတယ်သော်လည်းအထူးပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှစ်ခုသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအနည်းဆုံးလိုအပ်သည်။ လောလောဆယ်နောက်ထပ်သုတေသန CSB များအတွက်အသင့်လျော်ဆုံးရောဂါရှာဖွေတံခါးခုံ  ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။
မလုံလောက်သောဒေတာ CSB ရဲ့ပျံ့နှံ့မှုနှငျ့ ပတျသကျ. တည်ရှိ။ ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက် CSB နှင့် ပတ်သက်. အကြီးစားအသိုင်းအဝိုင်းဒေတာ CSB အမည်မသိ၏စစ်မှန်တဲ့ပျံ့နှံ့အောင်ချို့တဲ့နေကြသည်။ သုတေသီများ3ကနေအထိနှုန်းထားများ  ထိခိုက်နစ်နာတစ်ဦးချင်းစီ၏အများစု (7% သို့မဟုတ်မြင့်မားသော) ပါဝင်သောအရွယ်ရောက်အမျိုးသားများနှင့်အတူ % 15 မှခန့်မှန်းကြသည်။ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးကကြီးမားသောလေ့လာမှုယောက်ျားတို့အတွက် 3% နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက် 1%  ဖြစ် CSB ၏ခန့်မှန်းချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်အထီးစစ်ရေးတိုက်ခိုက်ရေးစစ်ပြန်တွေထဲမှာပျံ့နှံ့ % 22 ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အမေရိကန်အမျိုးသား epidemiological အရက်အပေါ်စစ်တမ်းနှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများ (NESARC) မှဒေတာများအသုံးပြုခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse ၏ဘဝအချိန်ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း, CSB တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာ, (18.9%) အမျိုးသမီးတွေထက် (10.9%) လူတို့သညျအဘို့အမြင့်မားဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်  ။ အရေးကြီးသောပေမယ့်, ငါတို့သိကျွမ်းခြင်း၌အလားတူကွာဟချက် (% ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1980 ထံမှ3အထိကျယ်ပြန့်ပျံ့နှံ့ခန့်မှန်းချက်ကိုတွေ့မြင် DSM-5 ပုဒ်မ 1 သို့ 50 အတွက် DSM-III ကိုသို့ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏နိဒါန်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ၏ပါဝင်မှုကိုတားဆီးမအလေးပေးပြောကြား ) ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို  သတ်မှတ်ထားသောနှင့် thresholded ဘယ်လိုပြဿနာပေါ် မူတည်. ။
CSB အမျိုးသမီးတွေ  နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူတို့တွင်ပိုပြီးမကြာခဏပုံပေါ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်-အသက်ကြီးနမူနာ [21, 24] နှင့်ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များက [15, 25, 26] မိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်လျှင်လူတို့သညျ, CSB  ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုသမှုရှာပိုပြီးများပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ CSB လူတို့တွင်, အများဆုံးကဖော်ပြခဲ့သည်ဆေးခန်းစိတ်ပျက်စရာအပြုအမူ compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ပေါ့ပေါ့ / အမည်မသိလိင်သူစိမ်းအတူမျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြပြီးလိင်ပေးဆောင် [15, 28, 29] ။ အမျိုးသမီးများ, မြင့်သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိမ်နှုန်းများအနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအရေအတွက် CSB  နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
hypersexual ရောဂါဘို့လယ်ရုံးတင်စစ်ဆေးမှာတော့လူနာ 54% dysregulated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ကြုံနေရအစီရင်ခံ, တိုကျတှနျးထားသနှင့်ကြိုတင်လူကြီးဖို့အပြုအမူတွေ, အစောပိုင်းစတင်ခြင်းအကြံပြုခြင်း။ ရှစ်ဆယ်နှစ်ယောက်လူနာရာခိုင်နှုန်းလအတွင်းသို့မဟုတ်နှစ်ပေါင်း  ကျော် hypersexual ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်မှုကြုံနေရသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသွေးသားဆန္ဒရမ္မက်များ၏တိုးတက်မှု  အရေးကြီးသောဘဝ domains များအနှံ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ချို့ယွင်း (ဥပမာလုပ်ငန်းခွင်, မိသားစု, လူမှုရေးနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ) နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Hypersexual တစ်ဦးချင်းစီအပြုသဘောဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုထက်ပိုအနုတ်လက္ခဏာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်လိုလားသောဆက်ဆံရေးရှိသည်, Self-အရေးပါသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည် (ဥပမာအရှက်ကွဲခြင်း, Self-ရန်လိုမုန်းတီးမှု)  CSB များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအထောက်အကူပြုပေမည်။ ကန့်သတ်လေ့လာမှုများနှင့်ရောထွေးရလဒ်များကိုပေးထားသောကြောင့် CSB [33-36] functioning ချို့ယွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချ / အလုပ်အမှုဆောင်အတွက်လိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။
DSM-5 ခုနှစ်တွင် '' တဏှာ '' ဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်  များအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံနှုန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အလားတူပင်တဏှာ CSB ၏အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှုမှသက်ဆိုင်ရာပေါ်လာသည်။ ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတို့တွင်, ဘာစွဲ [37-41] ၏စိတ်ရောဂါ / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူအပြုသဘောဆက်နွယ်နေကြောင်းညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်ပြင်းထန်မှုအဘို့အစွဲလမ်း။ relapse သို့မဟုတ်လက်တွေ့ရလဒ်များခန့်မှန်းအတွက်တဏှာအဘို့တစ်ဦးကအလားအလာအခန်းကဏ္ဍ။
ကုသမှု-ရှာကြံလူနာ, တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ, နှင့်ရပ်ရွာကိုယ်အင်္ဂါများ၌, CSB အခြားသူများကို (ဥပမာအာဖရိကန်အမေရိကန်, လက်တင်, အာရှအမေရိကန်တွေ] [15, 21] နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဖြူ / ဥရောပတစ်ဦးချင်းစီအကြားပိုပြီးဘုံပုံပေါ်ပါတယ်။ လီမိတက် data တွေကိုတစ်ဦးချင်းစီ CSB များအတွက်ကုသမှုရှာကြံကြောင်းအကြံပြု ဒီတွေ့ရှိချက်ပိုမိုမြင့်မားဝင်ငွေနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ (အာမခံလွှမ်းခြုံအတွက်ပုဂ္ဂလိက-လစာကုသမှုပေးထားန့်အသတ်အပါအဝင်) ကုသမှုပိုမိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ, ပေမယ့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန် [15, 42] ရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မားလူမှုစီးပွားအဆင့်အတန်းဖြစ်နိုင်သည်။ CSB ရှိပါတယ် ထို့အပြင် [28, 43] ယောက်ျား [44, 44, 45] နှင့်အတူလိင်ရှိသည်သောလူတို့တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်နှင့် HIV ပိုးအန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ် (ဥပမာ condomless စအိုလိင်ဆက်ဆံ) ။ CSB အတွက်တာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်၏မြင့်မားသောနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် နှစ်ဦးစလုံးလိင်ကွဲနှင့် Non-လိင်ကွဲတစ်ဦးချင်းစီ, HIV နှင့်ကူးစက်သည်အခြားလိင်မြင့်မားမှုနှုန်းတွင်ထင်ဟပ်။
Psychopathology နှင့် CSB
CSB သည်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူမကြာခဏတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ hypersexual တစ်ဦးချင်းစီ၏ထက်ဝက်ခန့် [22,28,29,46] အနည်းဆုံး DSM-IV စိတ်ဓါတ်များ, စိုးရိမ်စိတ်, ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်သို့မဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါများအတွက်စံတွေ့ဆုံရန်။ compulsive ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်ကုသမှုရှာကြံ 103 ယောက်ျားအတွက်, 71%, တစ်ဦးခံစားချက်ရောဂါတစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါ  များအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါနှင့် 41% များအတွက် 24% အနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါအတှကျအ 47% စံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ။ %4မှ 20 ထံမှ Co-ဖြစ်ပေါ် CSB နှင့်လောင်းကစားရောဂါအကွာအဝေး [25, 26, 47, 48] ၏ခန့်မှန်းခြေနှုန်းထားများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အဘို့, လေ့လာခြင်းဖြတ်ပြီးမျိုးစုံစိတ်ရောဂါမမှန်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြိုးသမီးမြားအကြား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse  phobia, အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါနှင့်အကြောက်လွန်ရောဂါ, schizotypal လူမှုရေး antisocial, နယ်စပ်ဒေသ, narcissistic, ရှောင်ရှားရန်နှင့်စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး-compulsive ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်ပိုမိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
CSB ၏ NEUROBIOLOGICAL အခြေခံ
အတူ (သို့မဟုတ်ထံမှကွဲပြားမှု) ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမမှန် ICD-11-related အားထုတ်မှုနှင့်ကုသမှုကြားဝင်အကြောင်းကြားဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ် CSB ရှယ်ယာ neurobiological တူညီခြင်းရှိမရှိကိုနားလည်ခြင်း။ ဒီသုတေသနက၎င်း၏နို့စို့အရွယ်  တွင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့် Dopaminergic နှင့် serotonergic လမ်းကြောင်း, CSB ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအထောက်အကူပြုပေမည်။ ယောက်ျားတစ်ဦးကိုနမူနာအကြား CSB တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်းသောရလဒ်များအရအိပ်ယာထိန်းချုပ်ထားလေ့လာမှုမှာ citalopram များအတွက် positive တွေ့ရှိချက်ဖြစ်နိုင်သော serotonergic ကမောက်ကမဖြစ်မှု  အကြံပြုထားသည်။ Naltrexone တစ်ခု opioid ရန်, CSB နှင့်အတူဆက်စပ်ရမ္မက်နှင့်အပြုအမူနှစ်မျိုးလုံးကိုလျှော့ချမှာထိရောက်သောပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်လောင်းကစားစွဲလမ်းအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့် mesolimbic လမ်းကြောင်း [51-53] တွင် dopaminergic လှုပ်ရှားမှု opioid-related မော်ဂျူ၏အဆိုပြုယန္တရားများနှင့်ကိုက်ညီနေပေမည်။
dopamine နဲ့ CSB အကြားအများဆုံးဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားပါကင်ဆန်ရောဂါကပြောပြတယ်။ Dopamine အစားထိုးကုထုံး (ထိုကဲ့သို့သော pramipexole, ropinirole အဖြစ်ဥပမာ levodopa နှင့် dopamine agonists) [54-57] ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြား (CSB အပါအဝင်) ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်အပြုအမူတွေ / မမှန်နှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။ 3090 ပါကင်ဆန်ရောဂါလူနာများအနက် dopamine agonist အသုံးပြုမှု CSB [2.6] ရှိခြင်းတစ် 57-ခြံတိုးလေးသာမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာရှင်တို့တွင်အ CSB ကိုလည်းဆေးဝါး  ရပ်စဲလိုက်ပြီဖြစ်ရာတစ်ကြိမ်ငွေလွှဲသတင်းပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Levodopa လည်း  မျိုးစုံနဲ့အခြားအချက်များ (ဥပမာပထဝီတည်နေရာ, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ) များအဖြစ်, ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် CSB နှင့်အခြားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။
CSB ၏ pathophysiology လက်ရှိညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်, တက်ကြွစွာသုတေသနပြုလျက်ရှိသည်။ Dysregulated hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး function ကိုစှဲချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး CSB အတွက်မကြာသေးမီကဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ CSB ယောက်ျား dexamethasone ဖိနှိပ်မှု-စမ်းသပ် Non-နှိမ်နင်းဖြစ်နှင့်အဆင့်မြင့် adrenocorticotrophic ဟော်မုန်းပမာဏရှိသည်ဖို့ Non-CSB ယောက်ျားထက် ပို. ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏။ CSB ယောက်ျားအတွက် hyperactive hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး dysphoric စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ  အပြင်းအထန်နှင့်ဆက်စပ်သောတဏှာနှင့် CSB အပြုအမူတွေကိုအခြေခံလိမ့်မည်။
တည်ဆဲ neuroimaging လေ့လာမှုများအဓိကအား cue-သွေးဆောင် reactivity ကိုအာရုံစိုက်ခဲ့ကြသည်။ Cue-reactivity ကို  မတရားသောဖို့အထောက်အကူပြုအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်တိုကျတှနျးထားသနှင့် relapses ။ မကြာသေးမီက Meta-analysis သည်, ဤဦးနှောက်ဒေသများတွင်အဓိကဖွဲ့စည်းစေမည်အကြောင်းအကြံပြုသည် ventral striatum, anterior cingulate cortex (AC) နှင့်မူးယစ်ဆေး cue-reactivity ကိုနှင့် Self-အစီရင်ခံတဏှာမှ amygdala ဆက်စပ်အတွက်ဆေးရွက်ကြီး, ကိုကင်းနှင့်အရက် cue-reactivity ကိုအကြားထပ်တူသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် စှဲအနှံ့မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏ circuit ကို  ။ စှဲ၏မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီစွဲမူးယစ်ဆေးဝါးများများအတွက်မြှင့်တင်ရန် သာ. ကွီးမွတျအာရုံကိုဖမ်းအတွက်ရရှိလာတဲ့မူးယစ်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့မက်လုံးပေး salience, ချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေ, မျှော်မှန်းခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလှုံ့ဆျောမှု (သို့မဟုတ် 'လို') နှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်း posits ။ [61, 62] ။ ဒါကသီအိုရီကိုလည်း CSB  မှလျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကောလိပ်ကျောင်းများတွင်အမျိုးသမီးကျောင်းသားများကို 64 လအကြာမှာကိုယ်အလေးချိန်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှ Prospect related အစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်အတွက်နျူကလိယ accumbens လူ့ဆုလာဘ်-related ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်း  တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု။ အစားအစာသို့မဟုတ်လိင်မှုဆိုင်ရာတွေကိုမှဦးနှောက်ထဲမှာကြီးထွားဆုလာဘ် Response ကျော်နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဘုံအာရုံကြောယန္တရားအကြံပြုခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) စဉ်အတွင်း CSB အမျိုးသားများတွင် Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဗီဒီယိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအားတွေကိုထိတွေ့ဆွေမျိုးမဟုတ်သော CSB ယောက်ျားဖို့ dorsal anterior cingulate, ventral striatum နှင့် amygdala အတွက် သာ. ကြီးမြတ် activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဒေသများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု  တွင် -cue reactivity ကိုလေ့လာမှုများ။ ဤအဒေသများ functional ဆက်သွယ်မှုပုတွေကိုမှပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်ဒါပေမယ့် like နှိပ်ဘဲ, CSB နှင့်အတူလူတို့တွင်ခဲ့သည်။ ဤတွင်, အလိုဆန္ဒ '' အကြိုက် '' နှိုင်းယှဉ် '' လို '' တစ်ဦးအညွှန်းကိန်းအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ မပါဘဲသူတွေကိုနှိုင်းယှဉ် CSB နှင့်အတူယောက်ျားလည်းမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များ  တုံ့ပြန် သာ. ကြီးမြတ် anterior cingulate နှင့် striatal activation သရုပ်ပြခဲ့သည်။
လည်းမရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ် CSB ယောက်ျားညစ်ညမ်းတွေကို  ဆီသို့ဦးတည်အစောပိုင်းအာရုံကို Orient တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုပြသခဲ့သည်။ CSB ယောက်ျားကိုလည်း CSB  မပါဘဲယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်ဦးစလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအေးစက်တွေကိုအဘို့ သာ. ကွီးမွတျရှေးခယျြမှု preference ကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရန် သာ. ကြီးမြတ်အစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု, အရှင်စွဲ၏မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုသီအိုရီ supporting, အေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဦးတည် သာ. ကြီးချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ CSB ဘာသာရပ်များလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်း  ကိုတိုးမြှင် preference ကိုအတူ correlating လေ့၏ဒီဂရီနှင့်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကိုဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ရန်ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေများအတွက် preference ကိုနှင့်ပိုမို dorsal cingulate လေ့ပြသခဲ့သည်။ ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့လက်လှမ်းဝတ္ထုပစ္စည်းများအွန်လိုင်းရရှိနိုင်စေရန်တိကျသောဖြစ်နိုင်သည်။
ပါကင်ဆန်ရောဂါဘာသာရပ်များအနက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့  မရှိဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ် CSB ရှိသူများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒတိုးတက်သဖြင့်, စိတ်ခံစားမှု, သိမြင်မှု, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ်ပတ်သက်နေ limbic, paralimbic, ယာယီ, occipital, somatosensory နှင့် prefrontal ဒေသများတွင်တိုးမြှင်လှုပ်ရှားမှု, အမြင်အာရုံနဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်များကိုလည်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ CSB အဆိုပါ ventral striatum နှင့် cingulate နှင့် orbitofrontal cortical အတွက်ပိုမို Active ဆက်နွယ်နေကြောင်းလူနာ '' တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ  ထိုအပတ်စဉ်တွေ့ရှိချက်သည်ဤဆုလာဘ်-related ဒေသ activation တိုးမြှင့်ထားတဲ့အတွက်အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်သူတို့နှင့်အတူ resonate ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုတုန့်ပြန်ရှုမြင် ယေဘုယျသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ် [69, 70] မှတုံးတုံ့ပြန်မှုမှမတူဘဲသီးခြားစွဲ။ တခြားလေ့လာမှုလည်း prefrontal ဒေသများပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပြီ သေးငယ်တဲ့ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်လေ့လာမှုမှာ non-CSB ယောက်ျားနှိုင်းယှဉ် CSB ပိုမိုမြင့်မားသာလွန်တိုကျရိုကျ  ပျံ့ဆိုလိုပြသခဲ့သည်။
ဆနျ့ကငျြ, CSB မပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီကိုအာရုံစိုက်သည်အခြားလေ့လာမှုများလေ့များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ပါပြီ။ Non-CSB ယောက်ျားအတွက်, ညစ်ညမ်းကြည့်တဲ့ပိုရှည်သမိုင်းအလားအလာ desensitization  အကြံပြုခြင်း, ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံအောက်ပိုင်းလက်ဝဲ putaminal တုံ့ပြန်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အလားတူပင် andwomen CSB မပါဘဲယောက်ျားနှင့်အတူဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related အလားအလာလေ့လာမှုအတွက်ညစ်ညမ်းသူတို့ကိုသတင်းပို့ပြဿနာအသုံးပြုမှုပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့မဟုတ်သူတို့အားဆွေမျိုးညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံတစ်ခုအောက်ပိုင်းနှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအလားအလာရှိခဲ့သည်။ နှောင်းပိုင်းအပြုသဘောအလားအလာစွဲလေ့လာမှုများ  တွင်မူးယစ်ဆေးတွေကိုတုန့်ပြန်လေ့ခြီးမွှောကျနေသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မှနှိုငျးယှဉျ, ဒါပေမယ့်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်မဟုတ် CSB ဘာသာရပ်များအတွက် fMRI လေ့လာမှုများအတွက်ပိုကောင်းလှုပ်ရှားမှု၏အစီရင်ခံစာ, လေ့လာမှုလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစား, အတိုင်းအတာ၏နည်းလမ်းနှင့်လေ့လာမှုအောက်တွင်လူဦးရေအတွက်ကွာခြား။ အသုံးပြုတဲ့ CSB လေ့လာမှုကွာခဏထပ်ခါတလဲလဲဓါတ်ပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါဗီဒီယိုများပြသ; activation ၏ဒီဂရီအဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားစေခြင်းငှါဓါတ်ပုံများနှင့်လေ့သာရှိပြီးပြည်ပမှဗီဒီယိုများထူးခြားပြသလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်ထိုဖြစ်ရပ်-related အလားအလာလေ့လာမှုမှာပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့ရှိသူများအတွက်အသုံးပြုမှုနာရီအရေအတွက်ကအတော်လေးနိမ့်ခဲ့ [ပြဿနာ: 3.8, ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်စံသွေဖည်မှု (SD) = 1.3: 0.6, SD က = 1.5 နာရီအတွင်း / ရက်သတ္တပတ်] နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ အဆိုပါ CSB fMRI လေ့လာမှု (CSB: ထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ် 13.21, SD က = 9.85: 1.75, SD က = 3.36 နာရီ / တပတ်) ။ ထို့ကြောင့်လေ့အလားအလာပိုကောင်း cue-reactivity ကိုနဲ့ဆက်စပ်ပြင်းထန်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ, ယေဘုယျအသုံးပြုမှုကိုဆက်စပ်စေနိုင်သည်။ နောက်ထပ်ပိုကြီးတဲ့လေ့လာမှုတွေကဤခြားနားချက်ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်။
CSB သက်ဆိုင်သောမျိုးရိုးဗီဇဒေတာကျဲဖြစ်ကြသည်။ CSB ၏အဘယ်သူမျှမမျိုးရိုးဗီဇ-ကျယ်ပြန့်အသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 88 ၏လေ့လာမှုတစ်ခု CSB နှင့်အတူစုံတွဲလက်ထပ်  မမှန် (30%) သို့မဟုတ်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း (7%) အစာစားခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန် (74%) နှင့်အတူပထမဦးဆုံးဒီဂရီဆွေမျိုးသားချင်းများ၏မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးကအမွှာလေ့လာမှု 77% Non-shared သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်တွေ  မှတွေကပေါ်ကနေခဲ့သော်လည်းဗီဇပံ့ပိုးမှုများကို, ပြဿနာ masturbatory အပြုအမူတွေစပ်လျဉ်းကှဲလှဲ၏ 75% အဘို့မှတ်အကြံပြုသည်။ သိသိသာသာမျိုးရိုးဗီဇပံ့ပိုးမှုများလည်းပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်လောင်းကစားစွဲလမ်း [76, 77] များအတွက်တည်ရှိ။ အမွှာဒေတာ  အသုံးပြုခြင်းကြောင့်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုမှလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါများအတွက်တာဝန်ယူမှုအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ခန့်မှန်းအချိုးအစားကိုပိုမိုပြင်းထန်ပြဿနာများအတွက်မြင်ကြမြင့်မားအချိုးအစားနှင့်အတူ, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 50% ဖြစ်ပါတယ်။ Impulse နှင့်ဆက်စပ်အမွေဆက်ခံအချက်များ  ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အားနည်းချက်အမှတ်အသားကိုယ်စားပြုမည် သို့သော်ဤအချက်များ CSB ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏လေးသာမှုတိုးမြှင့်ခြင်းရှိမရှိသေးစူးစမ်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်း CSB ၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုအပေါ်သုတေသနပြု  တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောသုတေသီများ  CSB များ၏ကုသမှု Clinician အကူအညီအဖြေရှာတဲ့စံ  နှင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးအကဲဖြတ် tools တွေကိုအဆိုပြုကြပြီ သို့သော်ဤအကြေးများစွာ၏ယုံကြည်စိတ်ချရ, တရားဝင်မှုနှင့် utility ကိုအကြီးအကျယ် unexplored ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အနည်းငယ်အစီအမံလက်တွေ့အလေ့အကျင့်ဘို့မိမိတို့ယေဘုယျကန့်သတ်, အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
CSB အတွက်ကုသမှုကြား ၀ င်မှုများသည်နောက်ထပ်သုတေသနလိုအပ်သည်။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများ CSB များအတွက်တိကျသောဆေးဝါးဗေဒ [53, 82-86] နှင့် psychotherapeutic [87-91] ကုသမှု၏ထိရောက်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်အကဲဖြတ်ပါပြီ။ ထိုကဲ့သို့သောသိမြင် - အပြုအမူကုထုံးနှင့်လက်ခံမှု -and ကတိကဝတ်ကုထုံးအဖြစ်အထောက်အထားအခြေပြု psychotherapies CSB [89,91,92] အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပုံရသည်။ အလားတူစွာ serotonergic ပြန်လည်သိမ်းဆည်းမှုကိုတားစီးနိုင်သည့် inhibitors (ဥပမာ fluoxetine, sertraline နှင့် citalopram) နှင့် opioid antagonists (ဥပမာ naltrexone) သည် CSB ၏လက္ခဏာများနှင့်အပြုအမူများကိုလျှော့ချရာတွင်ပဏာမထိရောက်မှုကိုပြသခဲ့သည်၊ ရှိပြီးသားဆေးလေ့လာမှုများပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများဖြစ်ရပြီ။ လေ့လာမှုတစ်ခုတည်း  သည် CSB ၏ကုသမှုတွင်မူးယစ်ဆေး (citalopram) ၏ထိရောက်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်နှစ်ချည်ခြင်း၊
အဘယ်သူမျှမကြီးမားကျပန်းထိန်းချုပ်စမ်းသပ်မှုတွေ CSB ကုသ psychotherapies များ၏ထိရောက်မှုဆန်းစစ်တည်ရှိ။ အတိုင်းအတာများဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ  အများဆုံးလေ့လာမှုများအားနည်းအတိုင်းအတာများဒီဇိုင်းများ employ အဖြစ်, တည်ဆဲလက်တွေ့ရလဒ်များလေ့လာမှုများ၏ယေဘုယျကန့်သတ်ရန်ပါဝင် / ဖယ်စံအပေါ်ကွဲပြား, ကုသမှုအခြေအနေများအဘို့အကျပန်းတာဝနျကိုအသုံးပွုဖို့ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်ကုသမှုအလုပ်လုပ်ခဲ့ကောက်ချက်ချရန်လိုအပ်သောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများမပါဝင်ပါဘူး ။ အကြီးစား, randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုတွေ CSB ကုသဆေးဝါးများနှင့် psychotherapies ၏ထိရောက်မှုနှင့်သည်းခံစိတ်အကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်နေပါသည်။
တစ်ဦးစိတ်ရောဂါရောဂါအဖြစ် hypersexual ရောဂါ၏အဆိုပြုချက်ကိုတစ်ပုံစံတည်းနှုတ်ဆက်ပြီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ Pre-တည်ဆဲစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကိုဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာတစ်ခု extension ကိုအဖြစ်ကရှင်းပြခဲ့သည် '' ရောဂါ '' ၏တံဆိပ်ကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ  ပုံမှန်မျိုးကွဲ pathologizes ကြောင်းထမြောက်ပြီ, ဒါမှမဟုတ်အလွန်အကျွံ / ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပိုကောင်းဖြစ်နိုင်သည် အနုတ်လက္ခဏာပြည်နယ်များထက်တစ်ဦးကွဲပြားစိတ်ရောဂါရောဂါ [16,18] ကိုထိခိုက်ထိန်းညှိ။ သည်အခြားသုတေသီများ CSB နှင့်အတူအမည်တပ်ထားသောတချို့တစ်ဦးချင်းစီမျှသာအခက်အခဲသွေးသားဆန္ဒရမ္မက်နှင့်ထိုအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အကျိုးဆက်များမြင့်မားကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့မဟုတ်သောအဖြစ်ကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာရှင်းပြခဲ့စေခြင်းငှါအကြံပြုချက်များနှင့်အတူ  လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းရှိစေခြင်းငှါစိုးရိမ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆို မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ  ၏ရောဂါဗေဒမူကွဲ။
နှင့်အခြားမြင့်မားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်မကြာခဏလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထင်ဟပ်။ အဆိုပါပြဿနာသီးပြွတ်၌တစ်ဦးချင်းစီ high-အလိုဆန္ဒ / မကြာခဏ-လှုပ်ရှားမှုစပျစ်သီးပြွတ်  အတွက်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပို psychopathology သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည် CSB လက်တွေ့ဖြစ်ပွားမှုပိုသောအတွက်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြိမ်ရေများနှင့်အဆက်မပြတ်တစ်ဦးစဉ်ဆက်တစ်လျှောက်ပိုပြီးစည်းရုံးစေခြင်းငှါအကြံပြု
အဆိုပါစဉ်ဆက်သို့မဟုတ်အတိုင်းအတာ  ၏အထက်ပိုင်းအဆုံးမှာပေါ်ပေါက်ဖွယ်ရှိ။ CSB နှင့်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအကြားစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာထပ်တူရှိကွောငျးဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးပိုဆောင်းသုတေသနဆေးခန်းစိတ်ပျက်စရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူပါဆုံးအထူးသဆက်စပ် features တွေသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
DSM-5 များလွှတ်ပေးရေးနှင့်အတူလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူ reclassified ခဲ့သည်။ ဤပြောင်းလဲမှုစွဲသာစိတ်ကို-ပြောင်းလဲဝတ္ထုများ၏ ingesting နှင့်မူဝါဒ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာ  များအတွက်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဖွငျ့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းယုံကြည်ချက်စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဒေတာများကအခြားအပြုအမူတွေအတွက်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (ဥပမာဂိမ်းကစားခြင်း, လိင်, compulsive စျေးဝယ်) ပစ္စည်းဥစ္စာစှဲ [2,14] နှင့်အတူလက်တွေ့မျိုးရိုးဗီဇ, neurobiological နှင့်ဖြစ်စဉ်မျဉ်းပြိုင်ဝေမျှစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ CSB အပေါ်စာပမြေား၏တိုးပွားလာနေသော်လည်းသိကျွမ်းခြင်း၌မျိုးစုံကွာဟချက်ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်အလွန်အကျွံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအကောင်းဆုံးတစ်ခုစွဲအဖြစ်ခွဲခြားစေခြင်းငှါရှိမရှိကပိုအဖျားဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမတည်ရှိ။ စားပွဲတင်2တှငျကြှနျုပျတို့အပိုဆောင်းသုတေသန CSB ၏နားလည်မှုတိုးမြှင့်ဖို့လိုအပ်သည်အဘယ်မှာရှိဒေသများစာရင်းပြုစု။ ထိုသို့သောမလုံလောက်သောဒေတာအမျိုးအစားခွဲခြား, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုအားထုတ်မှုရှုပ်ထွေး။ neuroimaging ဒေတာပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့် CSB အကြားတူညီအကြံပြုစဉ်တွင်, ဒေတာသေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစား, တစ်ခုတည်းကိုသာအထီးလိင်ကွဲနမူနာများနှင့် Cross-Section ဒီဇိုင်းများအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားရှိပါသည်။ အပိုဆောင်းသုတေသနနွဲ့နှင့်တိုင်းရင်းသား / လူမျိုးရေးလူနည်းစုအုပ်စုများလိင်တူချစ်သူ, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုးနှင့်ဖက်လိင်လူများ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဥာဏ်ရည်နှင့်အခြားအဖွဲ့များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ, အမျိုးသမီးများအတွက် CSB နားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပိုပြီးသုတေသနလိုအပ်နေနောက်ထပ်ဧရိယာနည်းပညာအပြောင်းအလဲများလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါဘယ်လိုစဉ်းစားပါဝငျသညျ။ ပေးထားသောဒေတာ [98-100] လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအင်တာနက်နှင့်စမတ်ဖုန်း applications များမှတစ်ဆင့် facilitated ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုကြောင်း, နောက်ထပ်သုတေသန CSB ဆက်စပ်ပုံကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ် (ဥပမာ compulsive အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်လိင် chatrooms မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ) နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက် (ဥပမာ condomless လိင်, တစျခြိနျအပေါ်မျိုးစုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်) ။ ဥပမာအားဖြင့်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဖှလူကြီးများအကြားပေါ့ပေါ့လိင်လွယ်ကူချောမွေ့ဖို့ဒီဇိုင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့စမတ်ဖုန်း applications များ (ဥပမာ Grindr, FindFred, Scruff, Tinder, သန့်စင်သော, etc) ၏အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင်ရှိမရှိ access ကို hypersexual အပြုအမူတွေတစ်ခုတိုးလာအစီရင်ခံစာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်စောင့်ကြို အနာဂတ်သုတေသန။ ထိုကဲ့သို့သောဒေတာစုဆောင်းနေကြသည်နှင့်အမျှဝယ်ယူအသိပညာတိုးတက်မူဝါဒ, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာသို့ဘာသာပြန်ထားသောရပါမည်
ဤလေ့လာမှုစစ်ပြန်ရေးရာဦးစီးဌာန, VISN 1 စိတ်ရောဂါသုတေသနပညာရေးနှင့်လက်တွေ့စင်တာ, တာဝန်ရှိဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာနှင့် CASAColumbia ထံမှထောက်ခံမှုများကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်များ၏ content သေချာပေါက်ရန်ပုံငွေအေဂျင်စီများ၏အမြင်များကိုထင်ဟပ်နှင့်စာရေးဆရာများ၏အမြင်များကိုထင်ဟပ်မထားဘူး။ အဆိုပါစာရေးဆရာသူတို့ကဒီစာမူကိုများ၏ content မှလေးစားမှုနှင့်အတူအကျိုးစီးပွားမျှဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများကိုရှိသည်သတင်းပို့ပါ။
အဆိုပါစာရေးဆရာသူတို့ကဒီစာမူကိုများ၏ content မှလေးစားမှုနှင့်အတူအကျိုးစီးပွားမျှဘဏ္ဍာရေးပဋိပက္ခများကိုရှိသည်သတင်းပို့ပါ။ MNP အောက်ပါဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအကူအညီအထောက်အပံ့များသို့မဟုတ်လျော်ကြေးလက်ခံရရှိခဲ့သည် for: တိုင်ပင်ခြင်းနှင့် Lundbeck, Ironwood, Shire, INSYS နှင့် RiverMend ကနျြးမာရေးအကြံပေးတော်မူပြီ ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes, Mohegan Sun ကကာစီနိုတာဝန်ယူမှုဂိမ်း, Pfizer ဆေးဝါးများအတွက်အမျိုးသားစင်တာမှ (ယေးလ်မှ) သုတေသနထောက်ပံ့မှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်; မူးယစ်ဆေးစွဲ, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်သို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်စပ်သောစစ်တမ်းများ, မေးလ်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းညှိနှိုင်းပါဝင်ခဲ့ပြီ လောင်းကစားခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များတွင်ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများအဘို့တိုင်ပင်တော်မူပြီ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲန်ဆောင်မှုများပြဿနာလောင်းကစားန်ဆောင်မှုများအစီအစဉ်၏ Connecticut ဦးစီးဌာနများတွင်လက်တွေ့စောင့်ရှောက်မှုပေးသည်; အမျိုးသားကျန်းမာရေး၏ Institutes နှင့်အခြားအေဂျင်စီများများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖျော်ဖြေမူပြီ edited သို့မဟုတ်ဧည့်သည်-edited ဂျာနယ်များသို့မဟုတ်ဂျာနယ်ကဏ္ဍများကိုမူပြီ ခမ်းနားကျည်, CME ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားလက်တွေ့သို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျနေရာများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာပို့ချချက်အားပေးတော်မူပြီ; နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကျမ်း၏ကြေညာသူအဘို့စာအုပ်တွေသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းကြီးထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်။